Ben Geskin ayaa sheegay in Apple ay bilaabi doonto iphone iyada oo aan xog ogaal aheyn sanadka 2020 | Wararka IPhone
Waxay umuuqataa mid layaableh sida yar ee ay noogu qaadato inaan sanadba sanad uga gudubno markaan kahadalno iPhone. Xaaladdaas iyo ka dib falanqeeyaha caanka ah ee Ming-Chi Kuo uu bilaabay a warbixin ku saabsan suurtagalnimada iPhone 12 Naqshad la mid ah iPhone 4, Ben Geskin wuxuu la muuqdaa war bambo gacmeed si uu u noqdo mid dhab ah.
Haa, waxay u muuqataa in iPhone-ka soo socda ama ugu yaraan mid ka mid ah noocyada uu Apple diyaarin lahaa sanadka soo socda uu la imaan doono shaashad dhan 6,7-inji iyo Face ID iyo kamarad TrueDepth dusha sare, haa, tani si cad ayey u tahay iPhone bilaa darajo ah. Warku wuxuu ku dhex wareegayaa shabakada sida xumbada iyo nooca loo yaqaan 'Geskin' oo uu abuuray Geskin si uu u abuuro iPhone-kan ayaa ah midka aad ku arki karto sawirka madaxa.
Iyada oo si fudud loogu qoro akoonkiisa rasmiga ah, Geskin wuxuu muujinayaa iPhone-ka suurtagalka ah sanadka soo socda iyada oo aan lahayn birta
Kordhin leh: Mid ka mid ah noocyada '2020 iPhone Protypes' wuxuu leeyahay muuqaal 6.7-inch ah oo leh "ID ID" iyo Nidaamka kamaradaha TrueDepth oo ku yaal garka sare. pic.twitter.com/sAJE7J12ty
- Ben Geskin (@BenGeskin) 26 September ee 2019
Dhiniciisa, Kuo, wuxuu dhowr saac kahor sheegay in aan yeelan doonno naqshad la mid ah ta iPhone 4 iyo oo leh 5,4, 6,1 iyo 6,7 shaashadood, oo si cad ula jaan qaadaya warbixintan cusub ee Geskin. Hadda waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in la xaqiijiyo laakiin waxaan horeyba uga digeynaa inay runti tahay xilli hore oo aan weli la ogaan faahfaahinta moodooyinka cusub ee iPhone-ka, sidaa darteed waa inaan u feejignaano wax kasta oo nagu soo dhaca oo la sifeeyo waxa aan aaminsanahay inay been noqon karaan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, iPhone-ka oo aan lahayn qaan-gaadh ayaa talaabo cad oo macquul ah u noqon doonta Apple, waxaan arki doonaa waxa dhaca dhamaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Ben Geskin ayaa sheegay in Apple ay bilaabi doonto iphone iyada oo aan darajo la helin sanadka 2020
Waxaan weydiinayaa dijo
Haddii ay timaado iyada oo aan la helin 5G waxaan u heli doonaa hubaal!
Barnaamijka djay ee Apple ayaa loo cusbooneysiiyay iOS 13 iyo darawalada dibedda ayaa hadda la taageerayaa